Helimeysaan Kan idinku Nacfiga Badane ee Doorta Kan Idinku Dhibaatada Yar | Shabakada Gabooyaha
Helimeysaan Kan idinku Nacfiga Badane ee Doorta Kan Idinku Dhibaatada Yar
Doorashada la filayo iney ka dhacdo Somaliland 2017, waa mid masiiri ah oo khuseysa qof kasta oo Somaliland u dhashay, natiijadeeduna waxay saameyn ballaaran ku yeelaneysaa qof kasta oo walwal ka qaba mustaqbalka Somaliland mudada dheer.
Dadka Gabooye ayaa ah dad marwalba u jilcsan dhanka dowladihii kala duwanaa ee Somaliland soo maray, mid ay daryeel wanaagsan ka heleen majirin, mid kastaaba xilliga doorashada ayuu la xidhiidhaa qeyb ka tirsan siyaasiyiinta, kadib marka uu danihiisa gaartana aayar ayuu ka daneystaa, dhibaatooyinka iyo duruufaha ku hareeraysan Gabooye oo ah runtii mid aad laga garaabo mudanna dibba uma soo fiiriyo.
Sida aan ognahayba, dowladaha dunida ayaa ah kuwo ka fakara kobcinta danyarta iyo kor u qaadista garaadkooda aqooneed iyo kan dhaqaale, Laakiin Somaliland dowlahada ka dhashaa uma muuqdaan sidaasi ee waxaad mooddaa in ay u dhaqmaan sida in la yiri; dowladdu waxay u dhalatay dadka maalqabeenka ah iyo kuwa awoodda qabiil ku tiirsan, taana waxaa daliil u ah inaadan maqleyn miisaaniyadda 300 milyan ee dollar kor u dhaaftay in 1% ay ku leeyihiin beelaha ugu tamarta daran ee Somaliland ugu liita dhaqaale ahaan.
Si kastaba, waxaa muhiim ah iney shacabka Gabooye ku baraarugaan oo ay ogaadaan, in kolley cid wax u qabata oo ay ku indho doogsadaan aaney helayn!, laakiin ay ka fakaraan ayaa idiin dhibaato yar oo ku habboon in lasoo saaro?!!